Vatsim-pianarana - NLP - Master & PhD
Mpampianatra sy ny PhD in Natural Language Processing
6 taona ny fikarohana nefa tsy mieritreritra ny vola
Tsy bola • Tsy misy fanampiny asan'izy • iantohan'ny ny Governemanta
Ahoana no nianatra ny Tompo na ny PhD any ivelany? Ahoana no nianatra tany Amerika? Where to hianatra teny fanodinana voajanahary? Ahoana no hamoaka lahatsoratra siansa in ambony gazety? Where to mahazo vatsim-pianarana ho an'ny Mpampianatra tsara ny na PhD? Mitady famatsiam-bola feno na ny Tompo ny toerana Doctorat?
(Ity lahatsoratra ity dia tonga dia voadika Mba tsy hanahirana anao avy amin'ny teny anglisy am-boalohany. Miala tsiny izahay na inona na inona hadisoana.)
Ny Natural Fiteny Processing Laboratory ao amin'ny Center for computing Research (CIC) ao amin'ny National Politeknika Institute (IPN), Mexico City, Meksika, manolotra vitsivitsy ny vatsim-pianarana ny mpianatra iraisam-pirenena noho ny fitadiavam-bola Mpampianatra na Doctorat mari-pahaizana tao Computer Science tamin'ny thesis in ny faritra ny Natural Language Processing. Rehefa avy fitadiavam-bola mari-pahaizana maîtrise, ny mpianatra dia entanina hampihatra ny Doctorat ambaratonga, ary (raha handeha, matetika izy ireo no) ny vatsim-pianarana dia mivelatra mifanaraka amin'izany.
Ny lohahevitra dia ahitana, fa tsy voafetra ho, faritra rehetra Natural Fiteny Processing (NLP), kajy amin'ny solosaina, Linguistique (cl), Human Fiteny Technologies (HLT), ary mifandray faritra. Jereo ny boky sy gazety, ary niaro taratasy misy hevitra ho ohatra amin'ny fikarohana tombontsoa.
Habetsaky ny manam-pahaizana: Mpampianatra 600 USD, PhD: 800 USD eo ho eo isam-bolana (anisan'izany ny fialan-tsasatra, eto azo havaozina Info amin'ny teny espaniola). Izany dia mihoatra lavitra noho izay hahavita ara-dalàna velona sy nanofa efitra iray tao an-tanànan'i Mexico. Ny vatsim-pianarana dia tsy bola: ianao no tsy tokony hiverina izany; tsy misy fanompoana (toy ny fampianarana fanampiana) no takina. Ity no famelabelarana momba ny vatsim-pianarana voaomana ho India (indrindra mety mampihatra ny County, koa).
Duration: Mpampianatra: hatramin'ny 2 taona (matetika extendable ny 2,5 taona), PhD: hatramin'ny 4 taona.
Karazana fandaharana: Research. Samy fandaharana dia mifantoka amin'ny fikarohana siantifika sy ny boky, fa tsy ny fanatsarana ny fahaiza-manao fandaharana.
Asa: ny ankamaroan'ny ny PhD nahazo diplaoma miasa ao amin'ny oniversite sy ny famatsiam-bola governmentally fikarohana, na dia misy tantaram-pahombiazana ny asa eo amin'ny orinasa ambony. MSC ny mpianatra matetika manohy ny Doctorat ambaratonga; ireo izay tsy nanapa-kevitra ny hanohy, miasa ao amin'ny oniversite na ny orinasa.
Fidirana: eto dia famaritana ny fieken-keloka fomba, fa Vakio tamin'ny; ho hitanao izany amin'ny rohy ambany ity pejy ity.
Nahoana no mianatra amin'ny CIC?
Fanamarinana: Mahakasika ny PhD sy Mpampianatra ny fandaharam dia iray amin'ireo fandaharana vitsivitsy tena any Meksika nahazo fanamarinana avy amin'ny Governemanta ho sehatra iraisam-pirenena tsara indrindra-fandaharana.
Sangany: CIC dia sangany foibe fikarohana, ny mpitarika ao amin'ny foibe fikarohana pirenena Computer Science.
Future: Saika rehetra ny PhD nahazo diplaoma ny mpampianatra na ny mpikaroka ao amin'ny oniversite tsara, ny sasany miaraka amin'ny mari-pahaizana doctorat taorian'ny. Ny ankamaroan'izy ireo efa tratra noho ny vokatra lehibe iray fanamarinana ny National mpikaroka ao Meksika. Maro ny Tompo ny nahazo diplaoma mbola mianatra ho PhD diplaoma, ny sasany aminay ary ny sasany tany Eoropa, ohatra, any Angletera na Frantsa.
Quality: Maro amin'ireo mpianatra nahazo manan-danja loka; ny telo tamin'izy ireo nahazo Medaly volamena avy any an-tanan 'ny Filohan' ny firenena, ary ny iray dia nahazo ny Microsoft Research Amerika Latina Fellowship.
Contacts: Tsy mazoto hiara-miasa amin'ny vondrona fikarohana tsara tany Eoropa, Etazonia, Azia, Afrika, sy Amerika Latina.
Fahafahana: maro ny mpianatra no lasa fiofanana amin'ny Microsoft, Oracle, Yahoo!, ary Xerox. Izahay manome famatsiam-bola ho an'ny fiofanana amin'ny oniversite tsara indrindra iraisam-pirenena.
Nahazo: ny mpianatra no nandresy fifaninanana iraisam-pirenena ny rafitra sy ny algorithms.
Mpanolo-tsaina: ny mpampianatra dia manana tsara boky firaketana an-tsoratra, dia academicians ny Meksikana Akademian'ny Siansa sy National mpikaroka ao Meksika ny tsara indrindra ambaratonga 3 (ambony indrindra), na 2 (faharoa ambony indrindra), ary efa nahazo zava-dehibe ihany koa ny mari-pankasitrahana.
Famatsiam-bola: Ny mpianatra dia nanome famatsiam-bola ho an'ny nanatrika ny fihaonambe (eo amin'ny faritra sy ny firenena indraindray any ivelany), ary koa ny famoahana ao amin'ny gazety ambony izay mitaky fandoavam-bola.
Atao: ny mpianatra handray anjara amin'ny fandaminana ny lehibe iraisam-pirenena fihaonambe toy ny CICLing na MICAI sy hanampy ny mpanolo-tsaina eo amin'ny hafa manan-danja asa, toy ny manova malaza gazety: CyS, IJCLA, POLIBITS, izay mpampianatra ny Laboratory no tonian-dahatsoratra-in-Chief.
Ambience: Manana ekipa iraisam-pirenena ny mpampianatra sy ny mpianatra. Ny mpampianatra dia manana fandaharam-PhD avy ary ny Laboratory manana na nanana mpianatra avy . Ny mpampianatra dia manara-maso, na dia nanara-maso taratasy misy hevitra amin'ny .
Friendly rivo-piainana: ny mpampianatra dia manampy ny mpianatra sy ny namana; isika rehetra no namana tsara.
Freedom: ny mpianatra hisafidy ny lohahevitra tiany; dia mampifanaraka ny zavatra mahaliana. Isika koa dia liberaly tahaka ny hanatrika, andro na ny fanadinana, sns
Tourism: Meksika no tena mahaliana sy firenena vahiny, manan-karena teo amin'ny tantara, ny kolontsaina, sy ny natiora. Avia ny mahita zavatra hafa avy tany an-tranonao!
Mandrakizay fahavaratra: Ao anaty ririnina frosts ao amin'ny Avaratra ianao, dia hahazo masoandro sy ny palma. Tsy mangatsiaka ary saika tsy mafana loatra.
Mila bebe kokoa ny antony? Avia, ka hahita ianao.
Boky sy gazety amin'ny fihaonambe manan-danja na gazety.
Fikarohana iraisam-pirenena mijanona ao ambony oniversite.
Asa manavanana diplaoma.
Rehefa nahazo diplaoma, niditra ny PhD fandaharana, miaraka aminay na amin'ny hafa mitarika oniversite.
Strong boky firaketana an-tsoratra ao amin'ny gazety ambony.
Ambaratonga asa manavanana sy ny hafa firenena sy iraisam-pirenena loka.
Rehefa fizarana diplaoma, ny fahazoana ny lohatenin'ny National mpikaroka ao Meksika, na mitovy ao amin'ny firenena.
Strong liana, tena antony, fahaleovan-tena tamin'ny fianarana sy ny fikarohana.
Research liana manokana amin'ny Natural Language Processing na mifandray faritra, araka ny fikarohana lohahevitra soso-kevitra ianao.
Tapa-kevitra ny hamita tanteraka ny fandaharam-potoana: niaiky indray mandeha, dia tsy maintsy hamitana ny fandaharana sy handray ny mari-pahaizana.
Scripting Programming na fahaiza-manao (fampiharana haavon'ny) no ilaina, na raha ny PhD azo famelana, amin'ny vonona ny hianatra ny teny fandaharana toa an'i Python.
Mahazatra amin'ny solosaina fototry ny siansa, toy ny angon-drakitra rafitra, algorithms, Programming fiteny; fahalalana tsara ny fandaharana teknika dia miampy lehibe.
Tsara ny fahalalana ny teny Anglisy: namaky teny sy nanoratra ao amin'ny sehatra siantifika-teknika.
Vonona hamoaka siansa ambony taratasy amin'ny gazety. Vonona ny hahazo ny fanoratana sy ny famoahana ny kolontsaina. Fa PhD, boky ao amin'ny Isi JCR-gazety indexed takiana ho an'ny diplaoma.
Vonona handray anjara amin'ny fiaraha-mientana ny Lab, toy ny fandaminana ny fihaonambe, ary amin'ny ankapobeny vonona hanampy dia miampy.
Vonona ny hianatra teny Espaniola dia miampy: dia mety indrindra manatsotra ny fiainanao eto. Satria fantatrareo mialoha Zavatra tsy ilaina.
Faharetana: fampiharana ny iraisam-pirenena dia mety mitaky ny fandaharana antontan-taratasy be, anisan'izany ny voamarina fandikan-teny, sns
Vita teo aloha mari-pahaizana amin'ny maro tsara; fa ny Tompo, vita BSc ambaratonga; for PhD, vita ny mari-pahaizana Master (na dia mety ho mahery niaiky kandidà amin'ny BSc mari-pahaizana).
Resy lahatra. Inona ny dingana manaraka?
Hifandray mpampianatra izay tianao ny hanana toy ny mpanolotsaina; Alexander Gelbukh, Grigori Sidorov, Ildar Batyrshin, na Hiram Calvo (misafidy iray ihany, niara fandraisana anjara dia holavina). Mba asio:
CV tanteraka amin'ny boky firaketana (raha misy) ary ny fahaiza-manao (raha misy), manan-danja hafa eo rakitra. Ambaratonga mifandray teo aloha ny taratasy sy ny Score transcripts ho ilaina.
Nahoana ianao no te hiasa ao amin'ny faritr'i NLP? Inona no zavatra fantatrao momba izany, na inona ny traikefa amin'ny lohahevitra mifandraika izany?
Nahoana manokana no tianao ny hianatra any CIC? Inona no antenaina avy amin'izy io?
Inona no kasainao mandimby anao diplaoma? Ohatra, raha mampihatra ny Mpampianatra, moa ve ianao mikasa ny hanohy ny PhD?
Jereo ny loka pejy; ny anaranao no hanazava izany teo vita? Inona no hanampy antsika bebe kokoa hanatsarana ny anjara ny mpianatra nahazo voninahitra sy mari-pankasitrahana?
Topic: no manana hevitra manokana ho an'ny thesis? Raha izany no izy, masìna ianao, omeo anay sasany antsipirihany. Ny antontan-taratasy misaraka amin'ny fikarohana dia miampy tolo-kevitra, indrindra noho ny PhD.
Raha manamafy fa mihevitra anao mafy kandidà, azafady manaraka ny dingana amin'ny famaritana ny fieken-keloka fomba (amin'izao fotoana izao no nanoratako azy ny ankamaroany noho ny Doctorat ambaratonga, mangataka antsika ny toromarika ho an'ny MSC). Aza misalasala mifandray aminay, raha amin'ny fisalasalana.
Fanontaniana: Alexander Gelbukh.